दुबई G4S मा सुरक्षा रोजगार, विश्व सुरक्षा आज लागू
अप्रिल 22, 2018
अल्जेरियाको लागि दुबईमा कामहरू
दुबईमा सुरक्षा कार्यहरू
मा सुरक्षा रोजगार दुबई र संयुक्त अरब एमिरेट्समा. One of the hottest topics for job seekers. If you are searching for employment. The दुबई मा सुरक्षा रोजगार तपाईंको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो कम्पनी तपाईंलाई मद्दतको लागि तत्पर रहेको छ। हामी हौं संसारभरबाट चाहने कामदारलाई सहयोग गर्न। विशेष गरी दक्षिण अफ्रीका र दुबईमा भारतको क्यारियर खोज्ने र पाकिस्तानी नयाँ विदेशियहरुको साथ।
दुबई सिटी कम्पनी सधैं एक अर्कालाई क्यारियर खोज्ने। हाम्रो समूह संधै क्यारियर खोजीकर्ताहरूको मार्गदर्शन गर्दछ युएईमा धितो रोजगार खोज्न। हामीसँग आशा छ कि हाम्रो विशेषज्ञ टीम क्यारियर खोजीको समयमा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्षम छ। दुबई शहरमा तपाईसँग धेरै धेरै पेशेवर कम्पनीहरू हुन सक्छन्। G4S, हक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र अन्य दुबई सुरक्षा कम्पनीहरू।
त्यसोभए यो मनमा, तपाईले निश्चित रूपमा हाम्रो प्रयास गर्नुपर्छ दुबईमा सुरक्षा कार्यहरू कसरी पत्ता लगाउने पूरा गाइड। हाम्रो कम्पनीको मुख्य स्रोत हो कम्पनीहरू जहाँ तपाइँ फेरि पुनः सुरु गर्नु पर्छ। यस समय दुबई र अबू धाबीमा, त्यहाँ अमीर हुन्छन् अमीर अधिकारीहरू लागि सुरक्षा जब in दुबई ?.
बेशक संयुक्त अरब अमीरात मा एक छ लक्जरी सामानको लागि बढ्दो बजार। र यो विशेष रूपमा एक VIP व्यक्तित्व आउँदै। साथै, बढ्दो बजार नयाँ व्यवसायको लागि हो। VIP व्यक्तित्व को लागी, र उच्च-वर्गको ब्यक्ति। ती सबैलाई सुरक्षा गार्डको खाँचो छ।
त्यहाँ धेरै छन् रोजगार खोज्ने तरिका। विशेष गरी यदि हामी संयुक्त अरब अमीरातको लागि मार्गदर्शन गर्दछौं। नयाँ विदेशियहरुको लागी रोजगारी गरिनेछ धेरै लाभहरूको आशा गर्न सक्छ। उदाहरण मध्ये एउटा एक स्थिर कार्य हो दुबई हवाई अड्डा सुरक्षा। जब नयाँ कम्पनीले दुबई कम्पनीलाई रोजगार दिनेछ। तिनीहरूले उसलाई एक दिन्छन् एक लामो अवधि को लागी राम्रो अनुबंध.
मलाई सुरक्षा गार्डमा के चाहिन्छ?
दुबईमा सुरक्षा गार्ड बन्नको लागि। तपाईंलाई चाहिन्छ अवश्य पनि योग्यता र अनुभवको केहि निश्चित हुन। जो सुरक्षा गार्डहरू छन् अमीरातमा काम गर्ने चाहना। चाहे फर्किएन भने तिनीहरू स्थानीय छन् कर्मचारीहरू वा विदेशी सम्पत्तिहरू। तिनीहरू सबै जान पर्छ अनि एक सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रशिक्षण को 36 घटेको हप्ता लामो लामो समयको पाठ्यक्रम पास गर्नुपर्दछ। दबाइ पुलिस अकादमी प्रमाणपत्रको3चरणहरू प्रबन्ध गर्दै। त्यसपछि स्थानीय प्राधिकरणले तीन परीक्षामा परीक्षण गर्यो।
मौखिक जब तपाइँ प्रश्नहरूको उत्तर दिन आवश्यक छ। त्यसोभए तपाईंले लेख्नुहुनेछ परीक्षण र व्यावहारिक ज्ञान मूल्यांकन। सुझावहरूमा एक नजर राख्नुहोस् कसरी परीक्षा पास गर्ने? यहाँ। र यदि एक सफल उम्मेद्वार सबै3परीक्षणहरू पास हुनेछ। ब्रिटिश व्यावसायिक शिक्षा संगठन शहर र गिल्ड्स निश्चित रूप देखि तपाईंलाई एक सुरक्षा गार्ड बनने मान्यता को प्रमाण पत्र प्रदान गर्न को प्रमाणपत्र दिनेछ।
Thes3कार्यक्रममा आपराधिक अनुसन्धानमा कक्षाहरू समावेश छन्। सुरक्षा उद्देश्य उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने। अग्निफाइटिंग कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सवारी साधन र परिसर कसरी गर्ने। सुरक्षाको लागि सकारात्मक पक्षमा दुबईमा काम। जब तपाईं 50 प्रतिशत भन्दा बढी पाठहरू सिक्नुहुन्छ व्यावहारिक हुन्छन्। त्यसोभए मात्र तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ को को एक गार्ड हुन। तर तपाईं यो कसरी सही तरीकाले गर्ने सिक्नुहुनेछ।
सुरक्षा क्यारियरको प्रबन्ध गर्दा मैले के सिक्न सक्छु?
उम्मेद्वारहरूले पनि सिक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू। साधारणतया बोल्ने बारेमा कसरी जान्छ ग्राहक सेवा विवाद कार्यहरू। किनकी सडकको अन्त्यमा व्यवस्थापनलाई मात्र थाहा हुनुपर्दछ र कसरी वाचाको सुरक्षा गर्ने। तपाईंले सिक्नु पर्छ कसरी आफूलाई र अरूलाई प्रबन्ध गर्ने आपतकालमा। उम्मेद्वारले सिक्ने कुरा भनेको अपराध दृश्य कसरी जोगाउने भन्ने हो। सकारात्मक पक्षमा, त्यो पुलिस विभागहरूबाट पाठ हुन सक्छ। स्थापना वा सवारी साधन कसरी खोज्ने बारे जानकारीको रूपमा। मुख्य व्यक्ति जसले सिकाईरहेको छ त्यो एक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हो सुरक्षा र सुरक्षा दुबई पुलिस अकादमीमा।
पुरा पाठ्यक्रम र कक्षाहरू वरिष्ठ प्रहरी अफसरहरू द्वारा दिइएको छ। त्यसकारण तपाईंले उचित कार्य गर्नु पर्छ। यसबाहेक, तपाइँसँग यो कुरा गर्न कसरी सोच्नु पर्छ खाडी कम्पनीहरूमा। केहि कम्पनीहरू, उदाहरणका लागि, अन्य सरकारी र व्यावसायिक सम्बन्धित स्रोतहरू जस्तै सिभिल डिफेन्सबाट प्रशिक्षकहरू प्राप्त गर्दै। सकारात्मक पक्ष मा, ती सबै एकेडेमी मा हुनेछ। दुबईमा सुरक्षा रोजगारीका लागि, धेरै कम्पनीहरूले आफ्नै प्रशिक्षण कोर्स स्थापना गरिरहेछन्। नकारात्मक पक्ष मा, परीक्षा एकेडेमी मा लिनु पर्छ।
सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम दुबई र अबु धाबीमा 2005 मा शुरू भएको थियो। तर मुख्य 2008 मा व्यवसाय चालू हुन शुरू भयो। हालसम्म, एकेडेमीले 57,000 सुरक्षाकर्मीहरूको बारेमा प्रशिक्षण दिइसकेको छ। कार्यक्रम यस तरीकाले डिजाइन गरिएको छ कि धेरै जसो व्यक्तिहरूले यसलाई पास गर्छन्। त्यसो भए तपाईंले यसको बारेमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। पारित अनुपात 80% भन्दा बढि छ।
दुबईमा सुरक्षा गार्डको वेतन के हो?
त्यो वास्तवमा निर्भर गर्दछ,केहि रोजगारहरू AED1,000 एक महिना सम्म 8,000 हुन्छन्। र त्यसपछि एक दिमागका साथ, तपाइँले हेर्नु पर्छ सुरक्षा गार्ड रोजगारी समीक्षा। संयुक्त अरब अमीरातमा, यो सबै निर्भर गर्दछ कि कुन नियोक्ता तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाई कुन भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?. थप पत्ता लगाउनको लागी तपाई दुबई र अबू धाबीबाट अन्य एक्सटेट्स लाई सोध्न सक्नुहुन्छ। पत्ता लगाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो मजदूरीको बारेमा अरूलाई सोध्नुहोस्। तपाईं को वास्तव मा यो थाहा छैन जब सम्म तपाईं वास्तविक को लागि बाहिर नहीं मिलेगा।
दुबईमा समय लिदै सुरक्षा जागिर खोज्दै। मानक काम खोज यो समय लिइरहेको छ। कुनै कुरा छैन तपाइँ कति मेहनत गर्नुहुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा यसले लगभग 6months लिन्छ। समय तपाईं संयुक्त अरब एमिरेट्समा बिताउनुहुनेछ। यो सँधै तपाईंको पक्षमा खेल्छ, विशेष गरी विदेश बाहिर निस्कने.
एक सुरक्षा गार्ड को रूप मा, तपाईं एक आधारभूत तलब आशा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तर्फ तपाईको राम्रो अनुभवको साथ, तपाईं वास्तवमै राम्रो तलब व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। एक निजी वीआईपी सुरक्षा गार्ड को रूपमा, तपाईं 550 माथि दिन 1,500 AED गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक पक्ष मा, तपाईं आवश्यक छैन एमबीए योग्यता व्यवस्थापन गर्न.
दुबईमा सुरक्षा रिक्तिका कसरी पत्ता लगाउने?
धेरै कम्पनीहरु दुबई को लागी भर्ती गरीरहेका छन्। तथ्यको रूपमा, हाम्रो कम्पनीको दुबई र अबु धाबीमा रोजगार उपलब्ध छ। विशेष गरी ढोका सुपरवाइजरहरू र VIP सुरक्षा सहायकहरूको लागि। सामान्यतया अबू धाबी र दुबईमा बोल्ने तपाईं सक्नुहुन्छ धेरै कम्पनीहरू खोज्नुहोस् जुन सही व्यक्तिहरूको सही अवसर दिइरहन्छ। यो निम्न वर्षहरू मध्य पूर्वको सुरक्षा बजारको लागि ठूलो वृद्धि देखाउँछन्।
सकारात्मक पक्ष मा, धेरै रोजगार रिक्त पदहरूले एक कार्यक्रम सुरू गर्दैछन्। ती अवस्थाहरूमा एमिरेट्सले एक्सपो एक्सएनयूएमएक्स क्यारियरको लागि सुरक्षा गार्डहरू भाडामा लिएर प्रगति गर्यो। यी दिन जीसीसी क्षेत्र अन्ततः एक्सप्याट्सको लागि धेरै राम्रो रोजगारीहरू प्रबन्ध गर्न सुरू गरिरहेको छ। विशेष गरी अबू धाबी र दुबईमा कम्पनीहरु। यसबाहेक, एक्सपो 2020 सार्दै आएको छ र नयाँ कम्पनीहरूले विदेशीहरूलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरे। अर्कोतर्फ, तपाईले भर्ती कम्पनीहरूलाई पनि हेर्नु पर्छ। दुबईमा क्यारियरजेट वेबसाइट र दानव गल्फ नौकरिहरु वेबसाइट। तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग लागू गर्न लायक छन्।
दुबईमा ब्यानर काम
दुबैमा बाउन्सरको रूपमा सुरक्षा रोजगारहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। दुबई शहर दुबईमा कम्पनीले सुरक्षा रोजगारको पूर्ण सूची प्रदान गर्दछ। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो टीम प्रबन्ध गर्दैछ काम कसरी पत्ता लगाउने बारे विस्तृत जानकारी asasecurity person in Dubai. Havealook yourself how to find employment in the security sector. Because of the दुबई सुरक्षा गार्ड, संयुक्त अरब अमीरातमा काम र वेतन धेरै राम्रो छन्.
धेरैले गर्दा संयुक्त अरब अमीरात मा बाउंसर क्यारियर राम्रो तरिकाले भुक्तानी गरिन्छ। तर तपाईंलाई राम्रो अनुभव गर्न आवश्यक पर्दछ। यसको अलावा राम्रो खोज र जिम को ट्रेन। किनकी केहि नाइट क्लबहरु मा संयुक्त अरब अमीरात केही सहयोग खोज्दै। विशेष गरी बाह्य सुरक्षा कम्पनीहरूबाट। यस क्यारियरको एक मुख्य चीज भनेको कम्पनीको सम्पत्तीको रक्षा गर्नु हो। एक सुरक्षित र सुरक्षित वातावरण कायम गरेर स्थानीय कर्मचारीलाई मद्दत गर्दै केही समयको लागि.
बाउन्सरको रूपमा, तपाई भाडामा लिनु हुन्न। जब सम्म तपाईं कानूनी कानूनी अप्रत्यक्ष रक्षा कार्य गर्दछ। तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ, तपाईं जीवन र आफ्नो सम्पत्ती राख्नको लागि अर्डर राख्नुहुनेछ सबै समयमा सुरक्षित। बाउन्सरले सन्देह ग्राहकहरूको सहि कार्यहरू गर्दै। नयाँ रिपोर्टहरू प्रदान गरिनु पर्छ क्लबहरूमा घटनाहरूमा कुनै पनि संदिग्ध घटनाहरूको विवरणमा। यसबाहेक, गस्ती क्षेत्र अनियमित वा नियमित रूपमा निर्माण र परिसर।
क्लब अघि, यो बन्द हुनेछ। प्रायः बिग्रिएको छ दुबईमा काम भवन प्रवेशद्वारहरू र सवारी गेटहरूमा पहुँच र अनुगमन नियन्त्रण समावेश गर्दछ। रातको समयमा, काम अलि असुरक्षित हुन सक्छ। तर अन्य सुरक्षा गार्डहरूले हेर्नेछन CCTV मा अलार्म प्रणालीहरू। र धेरै जसो क्यामेरा र अपरेटि system प्रणालीले तपाईंलाई हेर्नेछ 24h एक दिन आपतकालीन स्थितिहरू पत्ता लगाउँदछ.
संयुक्त अरब अमीरात मा सुरक्षा क्यारियर को लागि G4S सर्वोत्तम
G4S सुरक्षा संसारमा विश्वको अग्रणी कम्पनी हो। एउटा प्रवासीहरूको लागि उत्तम समाधान। यसबाहेक, तिनीहरू संसारभरि संसारको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाताहरू मध्ये एक हुन्। G4S मध्य पूर्व मा काम को लागी एक उत्तम कम्पनी हो। सबैभन्दा धेरै प्रदर्शन गर्ने कम्पनी पनि हो Forbes रैंकिंग मा G4S.
G4S कम्पनीले धेरै लाभहरू प्रदान गर्दछ। बाट आधारभूत वेतन र बोनस उनीहरूको कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी यदि तपाईं रोमाञ्चक, इनामदायी र दीर्घकालीन क्यारियरका अवसरहरूको विशाल दायरा खोज्दै हुनुहुन्छ भने। G4S कम्पनी तपाईंको लागि हो। मध्येको एउटा संयुक्त अरब अमीरातमा दीर्घकालीन कार्यको लागि उत्तम स्थानहरू। यो कम्पनी हो जहाँ तपाईं वास्तवमा सुरक्षामा फरक पार्न सक्नुहुन्छ दुबईमा क्यारियर.
दुबई बजारमा सुरक्षा कार्य भित्र। G4S तपाईंको लागि राम्रो स्थान हो विशेष गरी यदि तपाईं विदेशी कामको रिक्तताहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। G4S को साथ तपाईंले मात्र विविधता र विविधता फेला पार्न सक्नुहुन्न क्यारियरका अवसरहरू जहाँ पनि अन्य कम्पनीहरूसँग।
पहिलो सुरक्षा समूह
अर्को इच्छुक कम्पनी पहिलो सुरक्षा समूह हो। यो कम्पनी कडाई स्वीकार गर्नुहोस् कि मध्य पूर्व सफलता। पहिलो सुरक्षा समूह ठूलो मात्रामा नयाँ व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्न निर्भर गर्दछ। फर्म विश्वास र सम्पूर्ण प्रणालीको विकास गर्दैछ। केहि निर्यातहरूसँग काम गर्दै छन् यो कम्पनी र दुबईमा सुरक्षा को गतिशील परिवर्तन। त्यसैले यदि तपाईं दुबईमा सुरक्षा कार्यहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। पहिलो सुरक्षा समूहले असाधारण व्यक्तिहरूको प्रबन्ध गर्दै। र तिनीहरूमध्ये एक हुनुहोस् एक नयाँ एक्सप्रेस को रूप मा यो वास्तव मा यसको लायक छ.
पहिलो सुरक्षा समूहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिशन छ। किनभने मध्य पूर्व मद्दत गर्नुहोस् फर्म एक कामको वातावरण प्रदान गर्न हो। यो कम्पनी संग, तपाईं सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत क्यारियर आकांक्षा प्रबन्ध गर्नुहोस्। प्रायः कर्मचारीहरूले आफ्नो सीप आधार बढाउँछन् र व्यक्तिगत बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्छन्। पहिलो सुरक्षा दुबईमा समूहको क्यारियर अत्यन्तै सम्भव छ। साथै, संयुक्त कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात मा धेरै बजारहरु भित्र विकास कार्यक्रमहरु समर्थित छन्।
यो कम्पनी राम्रो काम गर्दै संयुक्त अरब अमीरात पर्यटकहरू सुरक्षित छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। पहिलो सुरक्षा समूह प्रशिक्षण र नयाँ सुविधाहरू भित्र विश्व-स्तरीय कम्पनी बन्छन्। एउटै समयमा, तिनीहरू सबै नयाँ व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयोग्य छन् भित्र कम्पनी र नयाँ कर्मचारीहरू। संगठन भर मा धेरै अनुबंध को प्रबंध गर्ने व्यक्ति। संयुक्त अरब अमीरात मा सिक्योरिटी ठेकेहरु को प्रबंधन को उद्देश्य को लागि, कम्पनी आफ्नो कर्मचारीहरु लाई उनीहरूको क्यारियरको विकासको लागि नयाँ तरिका। अन्त्यमा, त्यो कम्पनी हाम्रो कम्पनी संस्कृतिमा धेरै गर्व हुन्छ।
कृपया तपाईंको मानव अधिकार विभागलाई तपाईंको CV को प्रतिलिपि बनाएर इमेल गर्नुहोस् info@firstsg.com.
हक सुरक्षा कम्पनी
हक सुरक्षा सेवाहरुमा, युएईमा अर्को भाडामा लिने कम्पनी। ती परिस्थितिहरूमा, नयाँ विदेशियहरुको लागि रोजगारीको अवसर खुला छ। यस कम्पनीको स्थान संयुक्त अरब अमीरातमा छ। धेरै राम्रो कम्पनी एक्सटेटको रूपमा काम गर्न. किनभने कम्पनीको धेरै भिन्न र विविध दृष्टिकोण छ। विशेष गरी दुबई मा एक नयाँ कर्मचारी को लागी, शारजाह र अबू धाबी।
हाक सुरक्षा कम्पनीसँग विभिन्न साइट छ संयुक्त अरब अमीरात भित्र स्थानहरु. प्रभाव मा धेरै कर्मचारीहरु दुबईमा रोजगार खोज्दै संयुक्त अरब एमिरेट्स भर. सामान्यतया बोल, यदि तपाईं हुनुहुन्छ रोजगारी चासो सुरक्षा उद्योगमा शीर्ष नियोक्ता मध्ये एक। हक सुरक्षा कम्पनीले तपाईंलाई सुरक्षा विशेषज्ञको रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्न सक्नेछ।
तपाईले धेरै लाभ लिन सक्नुहुन्छ हक सुरक्षा कम्पनीबाट। तपाईं प्रशिक्षण मा सामिल हुनुभएकोले र आफ्नो क्यारियर विकास गर्न सुरु गर्नुहोस् यस फर्मसँग। निश्चित रूप देखि, तपाईं आफु को एक राम्रो योजना संग मिल जाएगा। तपाईं आउन र हक सुरक्षा सेवाहरू संयुक्त संयुक्त अरब अमीरातमा सामेल हुनुपर्दछ। त्यसैले यो कम्पनी हो धेरै राम्रो दुबईमा जानको लागी.
आफ्नो पुन: सुरुवात पठाउनुहोस् इमेल: hr@hawksecurityservice.com
गार्डफोर्स सुरक्षा सेवाहरू एक विस्तृत दायरा सुरक्षा समाधान प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो सुरक्षाको लागि राख्नुभयो दुबई वा अबू धाबीमा क्यारियर। सामान्यतया, गार्ड फोर्स सुरक्षा सेवा हो दुबई प्रहरी सुरक्षा प्रणाली (DPS) द्वारा अनुमोदित। कम्पनीको उद्देश्य छ संयुक्त अरब एमिरेट्समा सब भन्दा ठूलो बन्न। गार्ड फोर्स सुरक्षा संग तपाईं एक कर्मचारी वा पर्यवेक्षकको रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ.
नकारात्मक पक्षमा, तपाईं यस कम्पनीको साथ बैठकको लागि जानुहुन्छ। तिम्ले पर्छ कर्मचारी बनने न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्। गार्ड फोर्स सुरक्षा सेवा संयुक्त अरब अमीरातबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय ग्राहकहरू छन्। तपाईं एक क्यारियर अवसर हुन सक्छ एक भित्र उद्योगहरूको विविधता। लामो अवधि मा, तपाईं खुद्रा, छनौट वा शिक्षा सुरक्षा संग पनि रोजगार रोज्न सक्नुहुन्छ। वर्तमान समय सम्म, कम्पनी भर्ती गर्दैछ आतिथ्य कम्पनीहरूको लागि। अग्रभूमिमा, अन्य व्यावसायिक कम्पनीहरू र औद्योगिक क्षेत्रहरूले गार्ड फोर्स सुरक्षा सेवाको साथ सहकार्य गरेका छन्।
They are also hiring for दुबईमा सीसीटीभी रोजगार
यहाँ एउटा लिङ्क हो जहाँ तपाई दर्ता गर्नु पर्छ http://guardforce.ae/career/
दुबई शहर कम्पनी अब प्रदान गर्दै दुबई मा रोजगार को लागी राम्रो गाइड। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसो भए, यो दिमागमा राखेर, अब तपाइँ गाईडहरू पाउन सक्नुहुन्छ, सुझावहरू र संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगार तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ।